Yemagariro CRM: Yemagariro Midhiya uye Kwevatengi Ukama Management
Customer Relationship Management ndiyo kiyi kumasangano mazhinji, achivapa ruzivo rwevatengi nedata ravanoda kuchengetedza hukama hwakanaka nevatengi vavo. Kuisa vezvenhau pamusoro pehukama hwehukama hwevatengi vako kunogona kukurumidza kuita kwekambani yako uye nekuvaka hukama hwakasimba - zvichizoguma nemikana yakawanda yekutaurirana nevatengi vari kunze kwemaitiro akajeka uye kuvaka nharaunda.
Emailvisionvision ichangobva kuburitsa Yemagariro CRM yeDummies, yemahara ebook iyo ichabatsira makambani kunzwisisa mutsauko uripakati Yemagariro CRM uye CRM pamwe nemaitiro ekuwedzera magariro mune avo maCRM kuyedza.
Kubva mubhuku: Zvemagariro enhau uye network zvakashandura hupfumi hwepasirese kuita chimwe chinhu senge pamusika mudhorobha, uko nzanga yemunharaunda, kwete yekushambadzira buzz, inosarudza kuti mabhizinesi anokura kana kukundikana. Yemagariro CRM mhinduro yehunyanzvi kune ino nyowani bhizinesi nharaunda. NeRuzhinji CRM:
Iko kukoshesa kuri munharaunda uye kuvaka hukama.
Via nzvimbo dzekudyidzana, kusanganisira Facebook neTwitter, vatengi vane uye vanodzora hurukuro.
Kutaurirana ibhizinesi-kune-mutengi asiwo mutengi-kune-mutengi uye mutengi-kune-tarisiro.
Mutengi anoshanda pamwe nemabhizinesi zvakananga kana zvisina kunangana kuvandudza zvigadzirwa, masevhisi, uye ruzivo rwevatengi.
Kukurukurirana hakuna kuita zviri pamutemo uye zvakanyanya "chaiko", uchibva kuchiratidzo kutaura kune nharaunda kutaura.
Iyo eBook inopa ruzivo rwese rwunodiwa - kubva pakuvaka zano, kusarudza tekinoroji chaiyo, maitiro ekushandisa tekinoroji, kudzidzisa vashandi vako, kuyera mhedzisiro - nzira yese yekudzivirira misungo yakajairika.
Kuzivisa zvizere: Ini ndakawana pre-kuburitsa vhezheni yeEbook ndikanyora kurudziro yaro. Emailview anga ariwo mutengi we DK New Media .
Iyo Domino Project: Vimba Iwe Pachekunyora Dambudziko
Aug 10, 2011 na7: 58 PM
chinyorwa chikuru! yemagariro CRM iri chaizvo kumusoro uye kumusoro. Wakambonzwa nezveGreenRope? Iyo inokutendera iwe kubata yako CRM uye nezvimwe zvese pane imwe chete dhibhodhi.